Firafitry ny firafitry ny milina bobongolo mandeha ho azy
Ny firafitra anatiny ao amin'ny tranom-bahiny: ny harom-baravarana dia rafitra bontolo tsy misy fangarony, noforonin'ny teknolojia fanamafisana takelaka 10mm-12mm, ary ny tapany ambony dia mifandray amin'ny sandry mihodina amin'ny alàlan'ny vatan-kazo afovoany, tsindry miasa mafy ary bearika hanohanana ny savily eo anelanelan'ny ...
Ahoana ny fomba hisafidianana tsipika famolavolana mandeha ho azy?
Ny fisafidianana ny fomba maodely dia tokony hiorina amin'ny lafin-javatra isan-karazany, ao anatin'izany: (1) Fahamarinana fanipazana: Rehefa avo ny kajy fanaovana kajy ny haben'ny firafitry ny fanariana, ary ny fahasarotan'ny velarana dia takiana amin'ny fanariana, ny fomba famolavolana modely fitongilanana fasika avo ...
Valo tombony azo avy amin'ny milina bobongolo mandeha ho azy
1. Ny masinina mamolavola dia mihaona milina avo lenta, mikrokomputer ary rohy mifandraika amin'ny toeran'ny rafitra, izay tsapa tanteraka, tsotra ny miasa, afaka mianatra miasa haingana ny mpiasa, ary olona iray ihany no afaka mahita ny fizotran'ny masinina. Ny kalitaon'ny famolavolana dia miorina, fanamiana ...
Ahoana ny fomba hijerena ny milina famolavolana mandeha ho azy any am-piasana?
avy amin'ny admin tamin'ny 21-03-07
Rehefa avy nampiasaina nandritra ny fotoana fohy ny milina famolavolana, dia hilona moramora ny lohan'ny milina ary mihetsika miadana izay misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny asa. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy afa-tsy mpianatra izay nanadihady tsara ny milina famolavolana, nanadihady ny antony mahatonga ny toe-javatra tsy ara-dalàna ao amin'ny orinasa, ary ...
Ahoana ny fanatsarana ny fahamarinan'ny milina famolavolana mandeha ho azy?
Mba hanatsarana ny fahamarinan'ny milina famolavolana mandeha ho azy, ny sisin'ny lohataona kely amin'ny tsipika fisarahana dia tantanana ary voahodina tsara. Mihazakazaka milamina sy azo ianteherana ny milina famolavolana ary ny rafitra hydraulic dia mitarika fandidiana azo antoka. Ny fitaovana dia manana manipulator, izay mihena ...
Betsaka ny lesoka ao amin'ny rafitra hydraulic an'ny milina famolavolana mandeha ho azy. Ohatra, ny fandotoana solika dia mety hiteraka tsindry miasa, fikorianana na lalana mankany amin'ny tsy fahombiazan'ny rafitra fanaraha-maso ny hydraulic, ary hiteraka fahasarotana lehibe amin'ny famaritana ny lesoka hydraulic. Ny dingana manaraka ...
Inona avy ireo olana tokony hodinihina rehefa manamboatra tsipika famolavolana mandeha ho azy?
1. Fisafidianana ny milina lehibe sy mpanampy amin'ny tsipika famokarana orinasam-pamolavola sy ny fametrahana ny tsipika famokarana. Karazana fitaovana iray izay misy fiantraikany betsaka amin'ny famolavolana modely, toy ny fasika tsotra tanimanga, fasika sodium silicate ary fasika resin; fomba fikarohana modely ...
Inona avy ireo antony tsy mahataitra ny milina fanodinana mandeha ho azy?
1. Amin'ny dingan'ny fitadiavana ny tsy fahombiazan'ny milina famolavolana, voasakana ny sivana rivotra. Satria ny paompy manafaka dia mety hiteraka rano mandritra ny fizotran'ny fampandrosoana, ny singa sivana ao amin'ny sivana rivotra dia hosakanana amin'ny alàlan'ny fampidirana zavatra hafa ao anaty fantsona mandritra ny fotoana maharitra. ...
Fiatrehana ny tsy fahombiazana atrehana rehefa mampiasa milina famolavolana mandeha ho azy tanteraka
1. Noho ny hovitrovitra maharitra, mitohy ny fisehoan'ny vina fampandrosoana. Ireto manaraka ireto dia tsy mahomby amin'ny milina famolavolana: ny visy boribory enina M20 hexagon mampifandray ny latabatra mihetsiketsika sy ny piston vibration dia miala, ka misy elanelana eo amin'ny latabatra sy ny piston s ...
Mba hanatsarana ny fahamarinan'ny milina famolavolana mandeha ho azy, ny flash kely amin'ny tsipika fisarahana dia voahodina tsara. Ny milina mamolavola dia azo alefa tsara, azo ianteherana ary azo antoka satria entin'ny rafitra hydraulic. Ny fitaovana dia miampy robot, izay afaka mampihena ny ...
Ahoana no tokony hamerenana ny olana iraisana amin'ny tsipika famolavolana mandeha ho azy?
. Fanaraha-maso ny milina sy ny fitaovana 1. Tokony ho simba ny tavoara, ary ny fiorenan'ny fitaovana dia tokony ho malefaka sy azo itokisana. Tokony hametaka takelaka eo anelanelan'ny anvil sy ny varingarina manafintohina isika ho toy ny mpitroka tabataba sy mpitroka. 2. Ny tehina fitarihana ny vatana na ny lohan'ny mpitari-dalana dia tokony ...
Ahoana ny fomba hiatrehana ny fanidiana ny milina famolavolana mandeha ho azy amin'ny toe-javatra samihafa?
1. Mihidy aorian'ny fiovan'ny olona Matetika ny olona dia mila miala amin'ny asany aorian'ny fiasana ary mila mijanona ianao. Amin'ity tranga ity, ny mpiasa amin'ny famokarana dia tokony hanamarina ny milina famolavolana mba tsy hisy sombin-javatra amin'ny fitaovana. Noho izany, ny olona dia afaka mitazona ny fahadiovan'ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fanadiovana. 2. Shu vonjimaika ...
Milina Punch Out, Famolavolana tavoahangy, Machine manamboatra, Masinina bobongolo, Masinina fanodinana semi-mandeha ho azy, Sandbox,